Zapier ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ WordPress ပို့စ်များကို LinkedIn သို့အလိုအလျှောက်မျှဝေနည်း Martech Zone
Zapier ကို သုံး၍ သင်၏ WordPress ပို့စ်များကို LinkedIn သို့အလိုအလျှောက်မျှဝေနည်း
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2021 ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်၏ RSS feed သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ podcasts များကိုလူမှုမီဒီယာသို့တိုင်းတာရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် Feedpress ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ပလက်ဖောင်းတွင် LinkedIn ၏ပေါင်းစည်းမှုမရှိပါ။ LinkedIn ကနေတဆင့်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိတယ်၊ သူတို့ကဒါကိုထပ်ဖြည့်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်တယ် Zapier.
LinkierIn သို့ Zapier WordPress ပလပ်အင်
Zapier သည်လက်တစ်ဆုပ်စာပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်ပေါင်းတစ်ရာအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤဖြေရှင်းချက်ကိုပိုက်ဆံမသုံးပဲသုံးနိုင်သည်။ ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ ဒီနေရာတွင်မည်သို့စတင်ရမည်နည်း။
WordPress အသုံးပြုသူထည့်ပါ - Zapier အတွက် WordPress တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကိုထည့်သွင်း။ သီးခြားစကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်စိတ်မပူပါနှင့်။
Zapier WordPress ပလပ်အင်ကိုထည့်သွင်းပါ - အ Zapier WordPress ပလပ်အင် သင်၏ WordPress အကြောင်းအရာများကို ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Zapier အတွက်သင်သတ်မှတ်ထားသောအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပါ။
WordPress ကို LinkedIn Zap သို့ထည့်ပါ - အ Zapier LinkedIn Linkedin တွင် WordPress တစ်ခုဖြစ်သည်။
Zapier WordPress သို့ LinkedIn template ကို
LinkedIn သို့ဝင်ရောက်ပါ - သင် LinkedIn သို့ဝင်ရောက်ရန်နှင့်ပေါင်းစည်းမှုအတွက်ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ Zap ချိတ်သည်
သင်၏ Zap ကိုဖွင့်ပါ - သင်၏ Zap ကို Enable လုပ်ပြီးနောက် WordPress တွင်ပို့စ်တစ်ခုထုတ်ဝေပါက၎င်းကို Linkedin တွင်မျှဝေပါလိမ့်မည်။ သင်၏ Zapier Dashboard တွင် Zap တက်ကြွနေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ထိုအသင်သည်သွား! သင်၏ပို့စ်ကို WordPress တွင်တင်သောအခါ LinkedIn သို့အလိုအလျောက်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။
အိုး ... အခုငါအဲဒီမှာထုတ်ဝေနေပြီ၊ မင်းကမင်း LinkedIn မှာငါ့နောက်ကိုလိုက်ချင်နေတာပဲ!
လိုက် Douglas Karr LinkedIn တို့အပေါ်
Tags: လိပ်စာကိုလိပ်စာထည့်ပါlinkedinလိပ်စာထုတ်ဝေခြင်းwordpress အား wordpress သို့ထုတ်ဝေပါrss အားလိပ်စာသို့ဆိုရှယ်မီဒီယာထုတ်ဝေWordPresswordpress plugin ကိုWordPress မှ wordpressWordPress zap မှ wordpresszapperwordpress plugin ကို zapier
Crowdfire: လူမှုမီဒီယာအတွက်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်၊ သင်ပေးရန်၊ ဝေမျှရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်
စာရင်းစစ်ရန်၊ Backlink စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ သော့ချက်စကားလုံးသုတေသနနှင့်ရာထူးခြေရာခံခြင်းအတွက် Online SEO Tools 50+